XOG: 30-ka Kooxood Ee Kubbada Cagta Aduunka Ugu Koobabka Badan Oo La Shaaciyay, England & Spain Oo Min Laba Kooxood Ku Leh. - Gool24.Net
June 16, 2019 Mahamoud Batalaale
Taageerayaasha kubbada cagta aduunka ayaa isku khilaafsan kooxda kubbada cagta ugu fiican iyada oo taageerayaal kastaaba ay kooxdooda u arkaan in ay tahay kooxda aduunka ugu fiican gaar ahaan kooxaha aduunka ugu waa wayn.
Kooxaha qaar ayaa waqtiyo soo ahaa kooxo wadankooda soo qabsaday balse waqti kadib hoos u dhac ku yimid isla markaana ay xataa adag tahay in hadda magacooda ay garan karaan jiilalka danbe balse kooxaha qaar ayaa wali heerka ugu sareeya ku sii ciyaaraya.
Haddii lagu waydiiyo waa kooxdee kooxda aduunka ugu guulaha badan ee haysata koobabka ugu badani, kooxdee ayaad ku jawaabi lahayd? Waa xaqiiq in ayna ahayn su’aal sahlan balse ay tahay su’aal u baahan in taariikhda si buuxda dib loogu raaco.
Sidoo kale marka laga hadlayo kooxda kubbada cagta aduunka oo dhan ugu koobabka badan, waxaa qasab noqonaysa in wadan kasta oo aduunka ah si gaar ah loo xisaabiyo guulaha kooxihiisa si loo ogaan karo dal kasta kooxda ugu guulaha badan.
Dhinaca kale waxaa muhiim ah in la fahmo in koobabka loo qaybiyo koobab waa wayn iyo mar labaad oo lawada xisaabiyo koob kasta oo ay kooxi ku guulaysatay, waana arinta ay kooxuhu ku kala baxayaan.
Haddaba shabakada Gool24 oo aad uga barateen warbixino faah faahsan oo hadba aanu dhinac ka eegno kubbada cagta, ayaa halkan idiinku soo gubinaysa 30 ka kooxood ee kubbada cagta aduunka ugu guulaha badan ee koobabka ugu badan haysta.
Haddaba halkan kaga bogo xogta layaabka leh ee aad si buuxda ugu ogaan karto kooxda kubbada cagta caalamka ugu koobabka badan iyo sidoo kale wadamada ay ka tirsan yihiin kooxaha liiskan ku soo baxay.
Kooxda Al Ahly ee horyaalka dalka Masar ayaa noqotay kooxda kubbada cagta aduunka ugu guulaha badan ee koobabka ugu badan iyada oo waliba kooxda Al Ahly ay 11 jeer ku soo guulaystay horyaalka premier league ee dalka Masar 14 kii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
kooxda Al Ahly ayaa la aas aasay April 24, 1907 kii waxayna noqotay kooxda ugu saamaynta badan horyaalka Masar balse waxayna sidoo kale noqotay kooxda ugu taariikhda wayn koobab ahaan kubbada cagta caalamka.
Ma jirto koox kubbada cagta ah oo aduunka ka dhisan oo kooxda reer Masar ee Al Ahli ku gaadhi karta koobabka ay haysato waxayna kooxdani ku soo guulaystay 118 koob oo kala duwan oo iskugu jira koobab waa wayn iyo koobab kale.
Waxaa jiray waqti ay doodi dhex martay kooxda Al Ahly oo ka cadhootay Barcelona oo isku tilmaantay kooxda aduunka ugu guulaha badan, waxayna markaas bixiyeen jawaab ahayd in ay yihiin kooxda aduunka ugu koobabka badan oo ayna jirin koox guulaheeda taariikhiga ah gaadhi kartaa.
Haddii inta badan macaga kooxaha yurub ay aduunka kubbada cagta haystaan, ma jirto koox Al Ahly ku gaadhi karta tirada koobabka ay ku soo guulaysteen waqtigii dheeraa ay ee soo jireen.
Riix 2,3,4 si aad kooxaha oo dhan u ogaato xogtooda iyo waliba liiska oo dhan.
barce local uun baad faanaysa batalaalow
sideed sideeda ayaaba ku adage maxy koob wayn qadi